Kedu ihe bụ njikọ iwu? | Law & More B.V.
blog » Kedu ihe bụ njikọ iwu?
Na njikọ nkekọrịta gụnyere inyefe mbak nke ụlọ ọrụ na-eme njikọ doro anya site na aha ahụ. Okwu njikota nke akụ na-ekwukwa, n'ihi na ụlọ ọrụ ọzọ weghaara ụfọdụ akụ na ụgwọ nke ụlọ ọrụ. Okwu njikota iwu na-ezo aka na naanị ụdị njikọ iwu kwadoro na Netherlands. Agbanyeghị, ọ na-esiri ike ịghọta ihe njikọ a gụnyere ma ọ bụrụ na ị maghị usoro iwu. N’isiokwu a, anyị na-akọwa usoro njikọ njikọ iwu a ka inwee ike ịmata usoro ya na nsonazụ ya.
Njikọ iwu dị iche site n'eziokwu na ọ bụghị naanị mbak ma ọ bụ akụ na ụgwọ na-ebufe, mana isi obodo niile. Enwere ụlọ ọrụ na-enweta ihe na otu ma ọ bụ karịa ụlọ ọrụ na-apụ n'anya. Mgbe mmakọ ahụ, akụ na ụgwọ nke ụlọ na-apụ n'anya bụ ụlọ ọrụ kwụsịrị ịdị. Ndị nwe ụlọ ọrụ na-apụ n'anya na-aghọ ndị na-ekenye ndị ụlọ ọrụ na-enweta ya site na iwu.
N'ihi na njikọta iwu na-ebute nnyefe site na aha ụwa niile, akụ niile, ikike na ọrụ niile ka a na-enyefe ụlọ ọrụ na-enweta site na iji iwu eme ihe na-enweghị ọrụ azụmahịa dị iche iche achọrọ. Nke a na-agụnye nkwekọrịta dịka mgbazinye na mgbazinye, nkwekọrịta ọrụ na ikike. Biko rịba ama na ụfọdụ ụlọ ọrụ nkwekọrịta nwere mwezuga maka mbufe site na aha ụwa niile. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya inyocha nsonaazụ na nsonaazụ nke njikọ a chọrọ maka nkwekọrịta ọ bụla. Maka ama ndi ozo banyere ihe si na njikota nke ndi oru, biko lee ihe ederede anyi mbufe nke oru.
Kedu ụdị iwu iwu nwere ike ịbanye?
Dabere na iwu, mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa nwere ike ịga n'ihu na njikọta iwu. Legallọ ọrụ iwu a na-abụkarị ụlọ ọrụ nzuzo ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ ọha na eze, mana ntọala na mkpakọrịta nwekwara ike ịbanye. Otú ọ dị, ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere otu ụdị iwu ahụ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara karịa BV na NV. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, BV A na NV B nwere ike ịbanye na iwu. Ntọala C na BV D nwere ike ijikọ naanị ma ọ bụrụ na ha nwere otu ụdị iwu (dịka ọmụmaatụ, Foundation C na Foundation D). Ya mere, ọ nwere ike ịdị mkpa ịgbanwe ụdị iwu ahụ tupu njikọkọrịta ga-ekwe omume.
Yabụ, mgbe e nwere ụdị iwu abụọ yiri (ma ọ bụ naanị NVs na BVs), ha nwere ike ijikọ n'ụzọ iwu. Usoro a na - arụ ọrụ dị ka ndị a:
Jikota amaghị - usoro ahụ na-amalite site na ntinye mmakọ nke ndị njikwa njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ mejupụtara. Ndị nduzi niile bịanyere aka na amụma a. Ọ bụrụ na mbinye aka na-efu, a ga-ekwupụta ihe kpatara nke a.
Nkọwa nkọwa - mgbe nke ahụ gasị, bọọdụ ahụ kwesịrị ịkwadebe nkọwa nkọwa maka njikọ njikọta a, nke na-akọwapụta ihe iwu, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na akụ na ụba a na-atụ anya nke mmakọ ahụ.
Debanye aha na ọkwa - a ga-etinye akwụkwọ ahụ na Chamber of Commerce, yana akụkọ atọ kwa afọ kachasị ọhụrụ. Ọzọkwa, a ga-ekwuputa njikọ ahụ ezubere na akwụkwọ akụkọ mba.
Mmegide nke ndị na-akwụ ụgwọ - mgbe ekwuputara njikọ ahụ, ndị ji ụgwọ nwere otu ọnwa iji megide nkwekọrịta ahụ a chọrọ.
Nkwado nke njikọ - otu ọnwa mgbe ekwuputachara ya, ọ bụ nzukọ izugbe ga-eme mkpebi iji jikọta.
Realization nke njikọ ahụ - n'ime ọnwa isii nke ọkwa ahụ, njikọ ahụ ga-enwerịrị site na ịgafe ya omume notari. N'ime ụbọchị asatọ ndị a, njikọ njikọ iwu kwesịrị ịdị debanye aha n'akwụkwọ azụmahịa nke Chamberlọ Ahịa.
Olee uru na ọghọm dị na ya?
Agbanyeghị na enwere usoro iwu maka njikọta iwu, nnukwu uru bụ na ọ bụ ụdị nhazigharị dị mfe. Isi obodo dum gafere na ụlọ ọrụ na-enweta ihe ma ụlọ ọrụ ndị fọdụrụ na-apụ n'anya. Ọ bụ ya mere eji jikọtara ụdị njikọ a ugboro ugboro n'ime otu ụlọ ọrụ. Nyefe n'okpuru aha izugbe bụ ọghọm ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ iji ohere nke "cherị buru". Ọbụghị naanị uru ụlọ ọrụ ahụ, kamakwa, a ga-ebufe ibu ndị ahụ n'oge njikọta iwu. Nke a nwekwara ike ịgụnye ụgwọ ndị amaghi. Ya mere, ọ dị mkpa iji nlezianya tụlee ụdị mmakọ kachasị mma na nke ị bu n'uche.
Dị ka ị gụworo, njikọ nke iwu, n'adịghị ka òkè ma ọ bụ mmakọ ụlọ ọrụ, bụ usoro iwu kwadoro nke na-eme ka njikọta nke ụlọ ọrụ zuru oke nke na-ebufe ikike na ụgwọ niile site na ọrụ nke iwu. Maghị ma ụdị njikọ a bụ nke kacha mma maka ụlọ ọrụ gị? Mgbe ahụ biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara na njikọta na nnweta ma ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ banyere njikọta kachasị dabara maka ụlọ ọrụ gị, ihe nsonaazụ maka ụlọ ọrụ gị yana usoro ị kwesịrị ịme.
Previous Post Gba alụkwaghịm na ụmụaka: nkwurịta okwu bụ isi
Next Post Ihe niile banyere nhazi ego